အကာအကွယ်မဲ့လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing တင်ဒါရလဒ်များ၏လုပ်ခြင်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုအကာအကွယ်မဲ့လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing အဆိုပါတင်ဒါရလဒ်များ၏လုပ်ခြင်း
06 / 08 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
3 10 လျှပ်စစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များ၏ TCDD ခရိုင်နံပါတ်အကာအကွယ်မဲ့Mıntıkaအဆင့် Crossing အလိုအလျောက် Barrier လုပ်ခြင်းမှာတွေ့ရှိ
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 305853 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 321.084,34 TL တွေ့ 420.734,42 ပမာဏအတွက် TCDD3ဧရိယာMıntıkaအဆိုပါလျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier Hale ကတင်ဒါ 10 ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဆေးလိပ်သောက်၏ဆောက်လုပ်ရေးလေလံဆွဲခဲ့ပါတယ် Crossing အကာအကွယ်မဲ့အဆင့်ရှိမယ်ထားတဲ့5TL လောက်ကုန်ကျစရိတ် 346.000,00 ကမ်းလှမ်းမှုကို£ DORUK Energy ကိုထိနျး Ali SEVKET SÖNMEZရရှိခဲ့နု၏ရလဒ်များကိုအညီပေးတော်မူ၏။ နုလေလံပါဝင် 1 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, cable ကို 2500, 3700 မီတာပေးဝေရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတင်သောနှင့်ပိုက်များတင်သောပြုကွန်ကရစ် Foundations အားဖြည့်, Signal ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်ရွက်တိုင်အလုပ်ဖုံးလွှမ်း၏ installation နှင့်အတူလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုအောင်။ ပေးပို့အလုပ် 150 (တရာငါးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Unshielded လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ၏စီးပွားရေး Making 18 / 07 / 2019 လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏အကာအကွယ်မဲ့သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ၏စီးပွားရေး Making ။ ZONE3PCs အဆင့် Cross Electric အော်တိုအတားအဆီး Protected တည်ရှိသောဝယ်ယူခြင်းနှင့်စာရင်းထိန်းချုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ TCDD 10 ဇုန်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်စေ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 305853 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324643131 - 2324647798 ဂ) အီလက်ထရောနစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်မှုအတားအဆီးအတားအဆီး Hale ကလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအဆင့် Crossing ၏ေူပာင်းလဲရေးကိုစောင့် 27 / 08 / 2018 TCDD3။ လျှပ်စစ်စက်မှု Barrier အဆင့် Crossing Barrier ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုလေလံ AND SUBJECT ကို FOR Hale ကညီလာခံစီးပွားရေးေူပာင်းလဲရေးကိုနူးညံ့သောအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 အရေးကြီးစောင့်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 121 / Alsancak-Host က / IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:0232 464 31 31 / 4931 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်:0232 463 16 22-464 77 98 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: tcddihalexnumx@gmail.co f) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ: Erhan ငှကျ - ရုံးတာဝန်ရှိ 35 ။ နုနှင့် ပတ်သက်. လေလံသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဆငျမခွအလုပ်လုပ်မှအဆင့် Crossing အလိုအလျောက်အတားအဆီးနှင့်ဝင်ငွေခွန်လွယ်ပါတယ် Hale ကYaptırılacaktır 21 / 12 / 2012 သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဗဟိုတည်ဆောက်နေသည့်စီးပွားရေး-တည်ဆောက်ကြမည်ဝယ်ယူရေးရုံးဌာနပြုလုပ်ခြင်းဆငျမခွအဆင့် Crossing အလိုအလျောက် Barrier ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဝယ်ယူရေးရုံး HATUN OZTURK KARAOĞLUဖုန်း, တယ်လီဖုန်း NO0312 309 05 15 / 4139-4409 ဖက်စ်0312 311 53 များ၏ကော်မရှင်ကစာချုပ်ချုပ်ဆို 05 ANNOUNCEMENT, DATE ရက်နေ့ 20 / 12 / 2012 လေလံတင်သည့်နေ့စွဲနှင့်အချိန် 18 / 01 / 2013 တွင် TIME: 14: 00 SPECIFICATION, PRICE 250, တည်ဆောက်နေ FILE ကို NUMBER ကိုနူးညံ့ 2012 / 183985 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကို malzemesiparis@tcdd.gov ၏နူးညံ့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖွင့်လေလံအကြောင်းအရာ Administration Administration သဘောတူစာချုပ်တိကျတဲ့ .tr နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များတင်ဒါသတိပေးချက်များကြှနျုပျတို့၏ website ရုံကျနော်တို့အပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အဆင့် Crossing အဆင့်ဟာထိန်းအကွပ်မဲ့ Crossing ဖြစ်လာထံသို့ယူဆောင် 29 / 07 / 2019 ဖြစ်လာမှယူဆောင်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အဆင့် Crossing အဆင့် Crossing STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)7သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးငြင်းပယ်။ အဆိုပါ7အရေအတွက်ခုနှစ်တွင်ဒေသန္တရရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး5ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıkaထိန်းအကွပ်မဲ့အဆင့် Crossing ရဲ့အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အဆင့် Crossing ဖြစ်လာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ယူဆောင်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 335365 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ Silom လမ်း CAD ။ အမှတ်2/ 1 03030 AFYONKARAHİSARဗဟို STATION ကို / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621-4411 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အဆင့်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ဇုန်အတွက် Izmir လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုညွှန်ကြားမှုအဆင့်ကိုဖြတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အ 68 စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည် 13 / 12 / 2012 TCDD စီးပွားရေး IZMIR3။ အဆိုပါဇုန်အတွက်အဆင့်ကိုဖြတ်၏ Izmir လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုညွှန်ကြားမှုကာကွယ်မှုအနေဖြင့်ဒေသန္တရရုံးနှင့် ZONE, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ဝယ်ယူအတူ 68 လတာကာလ SERVICE ကိုခုနှစ်တွင် 68 Piece Protected အဆင့် Cross ၏အဆင့် Cross လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူများ 20 အပိုင်းပိုင်းလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံခန့်ခွဲရေး Protected အဆင့်ကျမ်းပိုဒ်၏ငါ၏အကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂရုစိုက်ဖို့လက်ထောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 12 အဆင့်ကိုကူးပါလိမ့်မည် နူးညံ့သောလိမ့်မယ် UNIT 3.BÖLGလုပ်ကိုင်ဖို့မွေးဘွားရာဌာနကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မရှင်နူးညံ့သောအထူးကုMUHSİNနုADRESİTCDD Administration 3.BÖLGညွှန်ကြားရေးမှူး / IZMIR ပုံတယ်လီဖုန်းခံစားရပြီး NO0232 464 31 31 / 41080232 464 77 98 ANNOUNCEMENT, DATE ရက်နေ့ဖက်စ် ...
level crossing များကိုသို့မဟုတ်မြေပေါ်တစ်ခွဲအော်တိုအတားအဆီးတံခါးဝသို့ဤဖွင့်ဖို့ 17 / 02 / 2012 သတင်းထောက်တွေကိုအထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman, တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား (YHT) မှသတင်းအချက်အလက်များပေးတစ်ဦးက TCDD 11 ကီလိုမီတာမီးရထားလမ်းတည်ရှိရာ 940 တထောင်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပါဝင်သည်, သူသည်ဤကိန်းဂဏန်း 2023 နှစ်ပေါင်း 25 အထိကီလိုမီတာ 940 တထောင်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်မှန်းကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, 2023 နှစ်, အသွားအလာသိပ်သည်းတန်းဖြတ်ခွဲမြေပေါ်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်အတားအဆီးမတော်တဆမှု Karaman, တူရကီအတွက်ရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအသေးအဖွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်ဖော်ပြနေတဲ့ကျမ်းပိုဒ်သို့ပြောင်းလဲသည်အဘယ်မှာရှိလိုင်းအတွက်သူ3တထောင် 415 အဆင့်ကိုဖြတ်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအပင်တစ်ပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်အဆင့် 54 တထောင်ဖြတ်ရုံ Karaman အခမဲ့ Cross-check လုပ်ထား၏အကာအကွယ်မဲ့အဆင့်ကိုကူးအရေအတွက်ကထောက်ပြကြပါပြီ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD3။ ကွန်ယက် 25 အရေအတွက်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ် (CCTV) ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါ၏ခရိုင် Manager ကို 07 / 11 / 2012 TCDD3။ အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ် (CCTV) ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါတင်ဒါ YAP ယူနိုက်တက်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မရှင်နူးညံ့သောအထူးကုMUHSİNနု ADDRESS ကို TCDD 25.BÖLGညွှန်ကြားရေးမှူး / IZMIR ပုံတယ်လီဖုန်းခံစားခဲ့ရ3.BÖLGလိမ့်မယ်၏ကွန်ယက်3အပိုင်းပိုင်း၏ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဖက်စ် NO0232 464 31 31 / 42690232 464 77 98 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 30 / 10 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 12 / 11 / 2012 တွင် TIME: 15: 00 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် 300 - နုယူပြီးလေလံဘာသာရပ်ပစ္စည်း ON ¨စျေးပြိုင် FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 158057 e-mail လိပ်စာ xnumxbolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.t Administration Administration စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD3။ ကွန်ယက် 25 အရေအတွက်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ် (CCTV) ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါ၏ခရိုင် Manager ကို 07 / 11 / 2012 TCDD3။ အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ် (CCTV) ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါတင်ဒါ YAP ယူနိုက်တက်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မရှင်နူးညံ့သောအထူးကုMUHSİNနု ADDRESS ကို TCDD 25.BÖLGညွှန်ကြားရေးမှူး / IZMIR ပုံတယ်လီဖုန်းခံစားခဲ့ရ3.BÖLGလိမ့်မယ်၏ကွန်ယက်3အပိုင်းပိုင်း၏ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဖက်စ် NO0232 464 31 31 / 42690232 464 77 98 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 30 / 10 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 12 / 11 / 2012 တွင် TIME: 15: 00 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် 300 - နုယူပြီးလေလံဘာသာရပ်ပစ္စည်း ON ¨စျေးပြိုင် FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 158057 e-mail လိပ်စာ Administration xnumxbolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.t ဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အစောပိုင်းသတိပေးမှုစနစ်အဆင့်ကိုဖြတ်ထူထောင်အတွက်အလိုအလျောက်အတားအဆီးစက်လုပ်သမားအလုပ် 03 / 08 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5များ၏အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်များကိုအင်ဂျင်နီယာအလုပ်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အလိုအလျောက်အတားအဆီးအဆင့်ကိုဖြတ်။ ကြိုတင်သတိပေးစနစ်များတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလိုအလျောက်အဆင့်ကိုကူးအတားအဆီးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 98291 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း ...
လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing
အကာအကွယ်မဲ့လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ၏လုပ်ခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Unshielded လျှပ်စစ်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ၏စီးပွားရေး Making
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အဆင့်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ဇုန်အတွက် Izmir လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုညွှန်ကြားမှုအဆင့်ကိုဖြတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အ 68 စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်
level crossing များကိုသို့မဟုတ်မြေပေါ်တစ်ခွဲအော်တိုအတားအဆီးတံခါးဝသို့ဤဖွင့်ဖို့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD3။ ကွန်ယက် 25 အရေအတွက်အလိုအလျောက် Barrier အဆင့် Crossing ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ် (CCTV) ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါ၏ခရိုင် Manager ကို